नासाउ: प्रशान्त महासागर मा द्वीप र बहामास को राजधानी छ। आकर्षण, समुद्र तट, नासाउ जलवायु
तपाईं कसरी कम्तिमा न्यानो समुद्र पानी मा एक दिन वा एक स्नान लागि मड्डी र बादल दिन चाहनुहुन्छ र घाम ताप्नुहोस् गर्छन्! खुसीको कुरा, आधुनिक मानिसले आफ्नो आन्दोलनहरु मा नि: शुल्क छ र ग्रह मा स्वर्ग को कुनै पनि कुना जाने गर्न सक्नुहुन्छ। हालैका वर्षहरूमा रूस टर्की, इजिप्ट र थाईल्याण्ड मा रिसोर्ट्स को पर्याप्त छन्, नयाँ र आकर्षक कुरा को खोज मा हो। गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई यो दिन बहामासको राजधानी नासाउ -। लामो समय को लागि, यो सुन्दर शहर स्थित छ जो द्वीप, पाइरेसी र plunder एक किल्ला थियो। तर हामीलाई सबै क्रममा गरौं।
खेल भौगोलिक नाम: तपाईं के गर्दै छन्, नासाउ?
तपाईं नासाउ को नक्शा हेर्न सुरु र धेरै होसियार हुनेछ भने, यो ठीक त्यही नामका दुई भौगोलिक वस्तुहरु फेला संभावना छ, तर तिनीहरूले संसारको विभिन्न भागमा अवस्थित छ। एक मामला मा, हामी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ , बहामास को राजधानी प्रशान्त महासागर मा एक द्वीप - तर अन्य नासाउ मा। पछिल्लो पनि, एक विस्तृत विवरण योग्य हुनुहुन्छ।
नासाउ - एक द्वीप सागर हराएको
प्रशान्त, शताब्दीयौंदेखि आफ्नो उपस्थिति परिवर्तन जो नष्ट द्वीपसमूह, धेरै मा। यो वर्ग छ नासाउ समावेश गर्नुहोस्। द्वीप एक भाग हो द्वीप समूह कुक आश्चर्यजनक प्राचीन सौन्दर्य छ। उहाँले लगभग पूर्ण नरिवल रूखहरू, केही स्थानीय एकमात्र आय छन् जो संग overgrown छ।
द्वीप निवासी को सुविधाहरू एक यो फारम विचार गर्नुहोस्। नासाउ लगभग कुनै खण्ड र lagoons छ भन्ने तथ्यलाई - यो आँधीबेहरी र बतास पूर्णतया खुला छ। यो निकै निरन्तर cyclones र typhoons को ravages अन्तर्गत पर्न गर्ने द्वीपहरु, जीवन complicates। तत्व को revelry प्रत्येक पछि उनि लगभग पूर्णतया विनाश घरमा ठीक छ।
द्वीप को विवरण
नासाउ धेरै सानो आकार छ, यो एक Atoll र एक द्वीप भनिन्छ गर्नुपर्छ। 800 मिटर बारी मा, निकै भएको Atoll गर्न दृष्टिकोण complicates जो lagoons को आकार अलिकति लम्बी गोलो राम्ररी सुरक्षित नासाउ कमी, - लम्बाइ मा मात्र 1200 मीटर र अधिकतम चौडाई छ।। सबै पक्षलाई यो कोरल reefs घेरिएको छ। आफ्नो चौडाई को nikotoryh ठाउँमा एक मीटर भन्दा बढी छ।
केही वर्ष पहिले, म सक्रिय टापुमा पर्यटन विकास गर्न गति दिन थियो जो एक सुविधाजनक बन्दरगाह, निर्माण गर्न एक परियोजना छलफल भएको थियो, तर परियोजना को एक पर्याप्त लागत यसको कार्यान्वयन रोक्छ।
धेरै पर्यटकहरु एक एकांत नासाउ आफ्नो छुट्टी खर्च गर्न चाहनुहुन्छ: को Atoll को जलवायु अल्छी र आराम छुट्टी छ। औसत वर्ष राउन्ड तापमान पर्यटकहरुका लागि धेरै सहज हुनेछ जो 25 डिग्री छ, भित्र राखिएको छ। तथापि, नासाउ मा पर्यटकहरु तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, टापुमा वहाँ बिल्कुल कुनै पूर्वाधार छ र हाल Atoll मा उद्योग विकास गर्न अपेक्षा छैन।
सुरुमा यो Atoll Inhabited थियो, यो Pukapuka को नजिकै द्वीप देखि निवासी बसे। यसलाई अब नासाउ Atoll मानिसहरूलाई पर्छ कि टिप्पण लायक छ।
यूरोप मात्र XIX सताब्दी को शुरुवात मा द्वीप पत्ता, तर तिनीहरूलाई मा एक छाप धेरै भएको छैन। शाब्दिक 70 वर्ष भित्र नासाउ समय समयमा फ्रान्सेली, बेलायती र whaling जहाज को कप्तान rediscovered।
को XIX सताब्दी को अन्त अमेरिकी Atoll लिए मा, त्यो ब्रिटिश साम्राज्यको निर्णयाधिकार अन्तर्गत पछि आए, र मात्र यो Pukapuka को बासिन्दा द्वारा किनेको थियो गत शताब्दीको बीचमा।
विद्यालय उमेर बच्चाहरु - को Atoll नवीनतम डाटा अनुसार बस 70 मानिसहरूलाई घर, थप तिनीहरूलाई को आधा भन्दा छ। सबै द्वीपहरु नाम पनि थिएन जो एक गाउँ, बाँचिरहेका छौं। हामी उल्लेख रूपमा, बारम्बार typhoons को द्वीपहरु को dwellings महत्वपूर्ण क्षति, त्यसैले तिनीहरू आफ्नो घर सकेसम्म सरल बनाउन, को छाप्राहरू को छत यो एकदम चाँडै अर्को तूफान पछि उनलाई बहाल बनाउँछ जो, पाम पात र हाँगा बनेको छन्।
नासाउ अन्तिम शताब्दीको बीचमा विद्यालय खोलियो। यसलाई जो स्थानीय, शिक्षा प्राप्त गर्न आफ्नो सरसम्पत्ति छोड्न आवश्यक गर्दैन लागि धेरै सुविधाजनक छ, हालसम्म काम गर्छ, र।
म नासाउ मा गर्न कुराहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ? दुर्भाग्यवश, छैन। सबै भन्दा राम्रो मामला मा, कुक टापुहरू पुग्नु भने, तपाईंले एक अतिथि रूपमा Atoll प्राप्त गर्न स्थानीय बासिन्दा को मद्दतले सक्षम हुनेछ। तर तपाईं सफल असम्भाव्य छन् रात को लागि यहाँ रहन - छैन पनि विदेशीहरू पक्षमा द्वीपहरु।
तर बहामास को राजधानी बारे के, यो बारेमा छ किनभने, हामी यस लेखको सुरुमा भने? हतार छैन, हामी तपाईंलाई अर्को नासाउ बारेमा अब भन्नेछु।
नासाउ शहर: विवरण
बहामासको राजधानी नयाँ प्रोभिडेन्स को द्वीप मा स्थित छ। शहर लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रमा कवर, र बहामास को सांस्कृतिक केन्द्र हो। द्वीप को कुल क्षेत्र - लगभग 20 वर्ग मीटर। मी, जो सुन्दर विला, उत्कृष्ट बन्दरगाह, अवकाश केन्द्र र सुन्दर समुद्री तट ढाँट्छन्। यो सबै पर्यटकहरु दिन र रात उपलब्ध छ।
शहर नै इङ्गल्याण्ड रस्मी को भवन को reminiscent छ। र यो किनभने द्वीप ब्रिटिश नियम थियो लामो समय को लागि, आश्चर्यजनक छ। को XIX सताब्दी को भवन को सबै भन्दा, तिनीहरूलाई थुप्रै ऐतिहासिक स्मारक प्रतिनिधित्व गर्छ।
हालैका दशकहरूमा, शहर आधुनिक मनोरञ्जन केन्द्र र क्यासिनो संग replenished छ। हालै निर्माण क्षेत्र केबल बीच जहाँ सबै नाइटलाइफ नासाउ केंद्रित छ किनभने यो छ, उज्ज्वल संकेत र मान्छे धेरै अचम्मका छ।
शहर को इतिहास
को XVII सताब्दी मा ब्रिटिश यहाँ शहर राखे थियो, तर ती दिनमा उहाँले Charlestown को गर्व नाम लगाउँथे। यस्तो सुन्दर नाम संग हुनत यो धेरै वर्ष को लागि अस्तित्व छ, र XVII सताब्दी को 90 को दशक मा नासाउ मा पुन: नामाकरण गरिएको थियो। यो नाम, शहर अन्तर्गत र भविष्यमा विकास गरे।
यो टिप्पण लायक छ उहाँको घटनापूर्ण को कथा छ। लामो समय को लागि नयाँ प्रोभिडेन्स क्यारेबियन को समुद्री मुख्य आधार थियो। तिनीहरूले धेरै खण्ड मा आफ्नो जहाज लुकेको र पिउने प्रतिष्ठानबाट मा जीवनको आनन्द।
वर्षौंदेखि शहर शक्ति ब्रिटिश, Spaniards र पनि अमेरिकी लडे। जबकि यो ब्रिटिश मुकुट शक्ति मजबूत छैन नासाउ, रक्तपातपूर्ण लडाई र मृत्यु को धेरै देखे। तर XIX सताब्दी को अन्त मा, द्वीप को अमेरिकी निकै चासो भयो। तिनीहरूले छुट्टी मा यहाँ आउँदै सुरु, र "ड्राई व्यवस्था" धेरै तस्करों ferrying रक्सी नासाउ मार्फत छ समयमा।
आज शहर - बहामासको पर्यटन को राजधानी, पर्यटक माथि सबै आगमन धन को आधा गर्न को बजेट को लागि ल्याउन। नासाउ विकास शहर छिटो लागि धेरै मूल्यवान छ पर्यटकहरु को आवश्यकता, को लागि adapts, तीव्र छ।
जब तपाईं बहामासको एउटा छुट्टी खर्च गर्न सक्छन्?
नासाउ जलवायु subequatorial बुझाउँछ। यो एक धेरै पर्यटन विकास गर्न, औसत तापमान तल 25 डिग्री खस्छ विरलै छ। जाडो (फेब्रुअरी, मार्च) मा, पर्यटक प्रवाह अलिकति घट्छ, तर रूसी वर्ष को यो समय मा सजिलो आराम गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर, हाम्रो स्तर अनुसार, बीस डिग्री को पानी तापमान - यो पौडी लागि पूर्ण स्वीकार्य छ।
को गर्मी समयमा, बहामास अक्सर हुर्रिकानेस र typhoons छन्, त्यसैले यो आराम लागि उत्तम समय छैन। उच्च सिजन सेप्टेम्बर मा नासाउ मा सुरु र फरवरी सम्म रहन्छ।
सामान्यतया, साना द्वीप आकर्षण र स्मारक को एक ठूलो संख्या छ, तर बहामास को राजधानी यस श्रेणी होइन। त्यसैले, नासाउ आइपुगे जो पर्यटकहरु के सल्लाह गर्न सक्छन्? पहिलो स्थानमा के हेर्न?
नियम, अतिथि संसद वर्ग पठाइएका छन्। त्यहाँ रानी भिक्टोरिया र उपनिवेश युग को लगभग सबै भवनहरु एक ठूलो स्मारक छ। तिनीहरूले विशिष्ट वास्तुकला र चरित्र विशेषता द्वारा छन्।
बहामासको धेरै संग्रहालयहरु सबैभन्दा लोकप्रिय समुद्री डाकू छ। यो शक्ति लापरवाह corsairs स्थापना गरिएको थियो जब द्वीप को इतिहास को त्यो अवधि समर्पित छ। संग्रहालय को प्रदर्शन धेरै रोचक संग्रह समय समयमा नयाँ आविष्कारहरू अद्यावधिक छ।
को पर्यटकहरु बीच ठूलो चासो हो र प्राचीन किला पानी देखि नासाउ रक्षा गर्न डिजाइन। धेरै vacationers बहामासको को पानी संसारका सबै बासिन्दाहरूले संकलित जो जलजीवालय, भ्रमण आनन्द।
नासाउ मा यात्राहरु फरक अभिमुखीकरण छ। तिनीहरूले ऐतिहासिक र मनोरञ्जन विभाजित छन्। पहिलो वर्गमा द्वीप को ब्रिटिश सम्पदा निरीक्षण समावेश छ। तर मनोरंजक भ्रमण कार्यक्रम खेलकुद, डुङ्गा यात्राको एक किसिम समावेश र, पाठ्यक्रम, रात मनोरञ्जन स्, नासाउ को जो एक ठूलो विविधता एउटा यात्रा।
बीच द्वीप क्षेत्र
नासाउ तटों सुन्दर र वैविध्यपूर्ण छन्, तर सबै भन्दा पर्यटकहरु मा आफ्नो समय खर्च गर्न रुचि प्रमोदवनमा द्वीप। भूमि को यो सानो टुक्रा सेतो बालुवा जलमग्न छन्, यो सिर्फ Nyu प्रोभिडेन्स बाहिर छ र पनि पुल गरेर जडान। यहाँ सबैभन्दा शानदार होटल हो, र तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ दिनको लागि रोचक गतिविधिहरू धेरै भन्दा मजा र धनी थियो।
प्रमोदवनमा द्वीप मा सबै भन्दा लोकप्रिय रिसोर्टमा भनिन्छ एटलान्टिस, र यो अक्सर लस भेगास तुलना गरिएको छ। यसलाई एक पटक उहाँले स्थानीय माझिहरु लागि मात्र एक हेवन सेवा, तर बस दुई दशक एक शानदार र फैशन रिसोर्टमा भएको छ।
नासाउ गर्न रूस देखि प्रत्यक्ष उडान उड छैन, तर हाम्रा सँगी ट्रान्जिट मार्गहरू को मद्दतले पनि बहामा को सौन्दर्य देखेर को खुशी अनुभव र राजधानी को सबै ठाँउहरु हेर्न सक्नेछन्।
मास्को Kremlin। ड्राइभिङ घूमन
अब्खाजिया मार्फत एउटा अचम्मको यात्रा। Gagra, घर बोर्डिङ "सनी"
अली बाबा महल4(Hurghada / मिश्र): फोटो र समीक्षा
मास्को को सांस्कृतिक जीवन। "हरियो थिएटर" तिनीहरूलाई पार्क। गोर्की
स्वादिष्ट चिकन ventricles: एक क्लासिक नुस्खा र खाना पकाउने विकल्पहरू
उद्यमी - आफूलाई अर्थपूर्ण लक्ष्य तय गर्ने एक व्यक्ति
एउटा सुन्दर हस्तलिपि कसरी बनाउने? म राम्रो लेख्न सिक्न सक्छौं?
स्टेडियम "बोरशिया" (डर्टमन्ड): कथा र फोटो
Filmography Kolina Ferta। आफ्नो सहभागिता संग फिलिमहरु को पूर्ण सूची, साथै अभिनेता को एक सानो बिट
कसरी एक केटी अनुहारमा प्रोफाइल, बच्चा र वयस्क पुरुष आकर्षित गर्न
Zhukovsky ब्रश Kiprensky र अन्य रूसी कलाकारहरूको पोर्ट्रेट
Ekarny bogeyman गर्ने हो? यो अभिव्यक्ति को अनुवाद